किन ‘शक्ति’विहीन भयो बाबुरामको नयाँ शक्ति ?
काठमाडौं २७ साउन– काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा ३० जेठ २०७३ मा आयोजित पार्टी उद्घाटन समारोहमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सही नीति लिएमा नयाँ शक्ति पार्टीले एमाले बाहेक अन्य दललाई धक्का दिन सक्ने’ टिप्पणी गरेका थिए । नयाँ शक्ति पार्टीको उद्घाटनको दिन अर्को तामझाम गरिएको थियो, नौ वटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ‘ज्याकेट एड’ दिएर ।
मूलधारमा राजनीतिक दललाई ‘धोत्रा, पुराना, संसदवादी’ दलको संज्ञा दिएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइले नयाँ शक्ति नामक दलको घोषणा गरेका थिए । स्थापनाको एक बर्ष पुग्नै लाग्दा नयाँ शक्ति केवल बाबुराम दम्पत्तिमा सीमित हुने देखिएको छ । माओवादीमा रहँदादेखि नै दाहिने हात रहेका देवेन्द्र पौडेल र बाबुरामको मान्छे भनेर ट्याग लाग्ने गरेका खिमलाल देवकोटा समेत बाबुरामबाट टाढिएपछि बाबुरामको नयाँ शक्तिको भविष्यबारे प्रश्न चिह्न उब्जिएको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गर्नुपूर्व केही सम्पादकसँग आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा विगतमा बाबुरामको प्रशंसा गरेर लेख्ने सम्पादकले ‘डा सापको पार्टी दल नभइ केवल विचार समूह’मा सीमित रहने टिप्पणी गरेका थिए । हुन पनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावले ‘कहिलै दोस्रो नभएका’ बाबुरामको वास्तविक हैसियत देखाइदियो । ‘बावुराम केजरीवाल बन्न गएका थिए, जनताले माओवादी हौ भनेर फर्काइदिए’ केही दिन पहिले ललितपुरमा पार्टी प्रशिक्षणको कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय चुनावमा नयाँ शक्तिले भोगेको पराजयप्रति टिप्पणी गर्दै भनेका थिए ।
बाबुरामले निर्वाचनको नजितालाई ‘नवजात शिशु, नयाँ शक्तिलाई लड्दैपड्दै दौड्न सिक्न र वैकल्पिक राजनीतिको लामो यात्रा तय गर्न जनताले दिएको आदेशलाई हामी विनम्रतासाथ स्वीकार्छौं !’ भन्दै बचाउ गरेपनि नयाँ शक्तिलाई मतदाताले हरियो बत्ति देखाएनन् । राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन, सशस्त्र ‘जन’युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले पहिलो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको थियो । निर्वाचनको नजितापछि नयाँ शक्तिका नेताहरुमा झनै निराशा देखापर्यो ।
खिमलाल देवकोटाले प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएको केही दिनपछि बिहीवार देवेन्द्र पौडेल, बामदेव क्षेत्री लगायतका नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेरै बाबुरामको कार्यशैली एकांकी भएको भन्दै बिरोध जनाए ।
किन मौलाएन नयाँ शक्ति ?
नाराको हिसावले बाबुरामले समकालीन राजनीतिक दललाई माथ गर्ने नारा दिएका थिए । प्रवक्ताको जिम्मेवारी त्यागेका खिमलाल देवकोटाका अनुसार अन्य दलले पनि नयाँ शक्तिले उठाएका एजेण्डालाई राजनीतिक नारा बनाइरहेका छन् । आर्थिक समृद्धि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र आफूहरुले उठाएको नारा भएको नयाँ शक्तिका नेताहरुको दावी छ ।
माओवादी भित्र पनि ‘बौद्धिक नेता’ भन्दै शहरीया बुद्धिजीवीले बाबुरामप्रति साहानुभूती राख्ने गरेका थिए । काठमाडौंको सडक विस्तार लगायत कतिपय विकास आयोजनाको शुरुआतका कारण बाबुराम चर्चामा थिए । तर स्थानीय चुनावमा काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रका जनताले पनि नयाँ शक्तिलाई पत्याएनन् ।
नयाँ शक्ति सबभन्दा कमजोर बन्नुमा उसको संगठनलाई कारक मान्छन् नयाँ शक्तिका नेताहरु । केही पूर्व सचिव, निबृत्त कर्मचारी र गैर सरकारी सस्था चलाएका व्यक्तीलाई लिएर बाबुरामले नयाँ शक्ति बनाएका थिए । ‘रिटायर्ड’ क्लव कसरी राजनीतिक दल बन्छ भन्ने कुरा शुरुदेखी उठेका थिए । उनीहरुसँग जनतालाई आकर्षित गर्ने एजेण्डा केही थिएनन् ।
चुनावको केही समय पहिले बाबुराम पत्नी हिसिला यमीको ‘देश खारेज गर’ भन्ने अभिव्यक्ती पनि धेरैका लागि मनमा बिज्यो । ‘अध्यादेश खारेर गर’ भन्दा ‘देश खारेज गर’ भनिएको भनेर हिसिलाको बचाउ गरिएपनि पत्रकार सम्मेलन गरेरै माफी माग्नु पर्ने अबस्था सृजना भयो । हिसिला यमीको विबादास्पद चरित्रका कारण पनि बाबुरामको शक्तिलाई धेरैले सहजै पत्याइदिएनन् ।
ओलीले भनेजस्तो नयाँ शक्तिले एमालेलाई कुनै धक्का दिन सकेन, केवल केही स्थानमा माओवादी केन्द्रलाई पराजीत गर्न बाहेक । समकालिन नेतामा बाबुराम ‘डायनामिक’ नेताको रुपमा चिनिन्छन, तर संगठन नहुदा नयाँ शक्ति शहरमै सीमित रह्यो ।
जिल्लाबासीले नै पत्याएनन् बाबुरामलाई
दोस्रो संविधानसभा पछि दलहरुको अवस्था कस्तो भयो भन्ने छुट्याउन पनि स्थानीय तहको चुनाव निकै महत्वपूर्ण रुपमा लिइएको थियो ।
वैकल्पिक शक्तिको वकालत गरेको नयाँ शक्तिलाई दिल्लीका केजरीवालसँग जोडिएर हेरिएको थियो । जसको पार्टी सार्वजनिक भए लगत्तैकै चुनावमा जित हात पार्न सफल भएको थियो । तर, बाबुरामको नयाँ शक्तिको घोषणामा देखिएको तामझाम त्यसपछि रहेन । पुरानै मानिसहरुलाई लिएर हिड्नु बामपन्थीलाई काखी च्याप्नु जस्ता आरोप उनीमाथि लागे ।
बाबुरामे स्थानीय तहको चुनावमा केही स्थानीय तहमा जित निकाल्ने अनुमानहरु गरिएको थियो । तर, त्यो अनुमान मिल्न सकेन । उनले आफ्नो प्रतिष्ठाको रुपमा लिएको गोर्खामा समेत एक स्थानीय तह जित्न सकेनन् । उनको पार्टीले काठमाडौं लगायतका बाबुरामलाई रुचाइएको क्षेत्रमा समेत आफ्नो उपस्थिति राम्रो गर्न सकेन ।
बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति
राजनीतिक क्रान्ति गरेरका पुराना दलले आर्थिक क्रान्ति गर्न नसक्ने र नयाँ जमानाको माग पूरा गर्न नयाँ बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आबस्यक रहेको बहस गरे बाबुरामले ।
पुराना राजनीतिक दलको भ्रष्ट कार्यशैलीबाट आजित बनेका मतदाताले नयाँ विकल्प खोजेको कुरा सही नै थियो । तर त्यो विकल्प बन्न सकेनन् बाबुराम ।
पार्टीको नाम मात्र नयाँ, तर पात्र र प्रबृत्ति पुरानै भनेर बाबुरामको आलोचना भयो । यसबीचमा भारतीय नाकाबन्दीको समयमा ‘मधेस केन्द्रीत दल’को मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नाकाबन्दीको अघोषित समर्थन गरेको भन्दै भट्टराइको आलोचना भयो ।
प्रधानमन्त्री रहेको समयमा दिएका ‘साँचो अन्तै छ’ तथा अर्थतन्त्र ‘सबमर्ज’ हुनसक्छ भन्ने जस्ता केही अभिव्यक्तीका कारण बाबुराममाथि लागेको भारत परस्तको आरोपलाई उनले चिर्न सकेनन् ।
पत्रकार रवीन्द्र मिश्रको समूहले पनि बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको वकालत गर्दै साझा पार्टी गठन गर्र्यो । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावमा काठमाडौंमा राम्रै चर्चा कमाएपनि दोस्रो चरणको चुनावमा पूर्वी नेपालको सुनसरी उपमहानगरमा रवीन्द्रको साझालाई जनताले पत्याइदिएनन् । परंपरागत राजनीतिक दलको विकल्पमा खुलेका दलप्रति मतदाताको अनाकर्षण देखिएन ।
बैकल्पिक शक्तिहरुको हालत रवीन्द्र मिश्रले प्रयोग गरेको बिम्ब ‘मेनु हेर्ने र अन्तिममा मोमो मगाउने’ जस्तै बन्दै गएको छ । नयाँ शक्ति नजमेपनि राजनीतिमा उसले अगाडी सारेका ऐजेण्डा राजनीतिक दलका साझा एजेण्डा बन्दैछन् ।
अब के गर्लान बाबुराम ?
सामाजिक सञ्जाल तथा ‘प्रगतिशील एलिट’ मा राम्रै वाहवाही र समर्थन पाउने बाबुरामले नयाँ शक्तिमा अन्य दलका नेता कार्यकर्ताको समेत ओइरो लाग्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर नयाँ शक्तिमा अन्य दलका नेता आउने होइन, भएकाले छाड्ने प्रबृत्तिले गर्दा नयाँ शक्तिको भविष्यको बारे टिप्पणी शुरु हुन थालेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सामु अव माओवादीमा फर्किने, साझा विवेकशील दलसँग मिल्ने या नयाँ शक्तिलाई नै निरन्तता दिने तीनवटा विकल्प देखिन्छन् ।
देवेन्द्र पौडेल लगायतले भट्टराई माथी एकांकीको आरोप लगाएकै साँझ उनले ‘हतासको मानसिकता बोकेर नयाँ शक्ति बन्न नसक्ने’ सर्कुलर पार्टी भित्र जारी गरेर बाँकी रहेका नेतालाई रोक्न खोजेको देखिएको छ ।
उनले कमी कमजोरीलाई आत्मसमिक्षा गर्दै आफूलाई नयाँ बनाएर मात्र नयाँ शक्ति गठन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै नयाँ शक्ति प्रतिको निष्ठामा आफूलाई तलमाथि नहुने उल्लेख गर्नुले उनले नयाँ शक्तिलाई निरन्तरता दिने मानसिकता बनाए छन् ।
तर, माओवादी बृत्तमा चलेको चर्चा र हल्लाहरुलाई मान्ने हो भने उनीसँग माओवादी एकता वा सहकार्य अव टाढाको विषय भने होइन ।
माओवादी परित्याग गर्नुमा प्रचण्डसँगको इगो एउटा कारण थियो । त्यसैले भट्टराईलाई माओवादीमा फर्किहाल्ने अबस्था बनेको छैन, नत मोहन बैद्य या विप्लव समूहको पार्टीमा जाने अबस्था छ ।
राजनीतिक एजेण्डा मिल्ने भएकोले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नारा यतिवेला दुवै दलको मुख्य राजनीतिक एजेण्डा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डाले माओवादी र नयाँ शक्तिलाई जोड्छ÷जोड्दैन अहिलै भन्न सकिँदैन । मुलुकमा बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको बहस भने रोकिने छैन ।
माओवादी युद्धको बेला देखि नै बाबुराम भट्राईलाई विश्वास गर्नेहरुले भने अझै बाबुरामले देशमा केही गर्ने भन्दै आशा मारेका छैनन् । भलै उनको नयाँ शक्तिले जनताबाट थोरै मत पाएको छ । ‘विद्वान नेता’को छवी बनाएका बाबुरामले नयाँ शक्तिलाई फेरि थप नयाँ बनाउँछन् वा पुरानै मार्फत केही नयाँ गर्छन् त्यो भने समयले बताउने छ ।
माओवादी र नयाँ शक्ति एकै ठाउँमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कसको एजेण्डा ?
साउन २७, २०७४ मा प्रकाशित
भारतमा आम आदमी पार्टीको पाँच वर्षे यात्रा : नेपाली दलले के सिक्ने ?
...त्यो घटना नभएको भए नेपाल दक्षिण कोरिया जस्तै विकसित भइसक्थ्यो
दिपेश पुन अस्पतालबाट डिस्चार्ज काठमाडौं, १ पुस- सवारी दुर्घटनामा परी घाइते भएका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङका छोरा दिपेश पुन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । गत मंसिर २४ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमा...
एमाले-माओवादीको पत्रकार सम्मेलन, के होला घोषणा ?
एसिसी यु–१६ प्रतियोगिताको नेपालको कब्जामा
पुस १६ गते त्रिविबाट आठ हजार विद्यार्थी दीक्षित हुँदै, ६२ जनालाई विद्यावारिधि